musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Matte Nhema Dhonza-Pasi Spray Kicheni Faucet
Matte dema remakicheni faucet ane yakanaka mhando
WOWOW ine ruzivo rwemaindasitiri mukugadzira iyo yakanakisa kuroora mutema kudhonza pasi faipits yekicheni kubvira 2008. Pasina mubvunzo chiitiko ichi chakanyatsotariswa mukushanda uye magadzirirwo ekudhira pasi kicheni faucet yeWOWOW. Nekuda kweichi chiitiko iwe unovimbiswa kuve nemhando yepamusoro faucet mukicheni yako, yakagadzirirwa zvakakwana kushanda uye pakupedzisira ine yakasarudzika dhizaini. Nechikonzero ichi, iyi yakakwira arc mate matema kudhonza kicheni faucet yeWOWOW ndiyo yakanyanya sarudzo kana iwe uchigadzira kana kugadzirazve kicheni yako.
WOWOW Dhonza Down Kitchen Faucets 2310700B
Iyo kicheni inogona kunge iri iyo imba mumba mako iwe yaunoshandisa yakawanda yenguva yako. Hakusi chete kicheni ndiyo nzvimbo yaunogadzirira chikafu chako. Pamusoro pezvo, vanhu vazhinji vakaisa hupenyu hwavo kukicheni. Funga semuenzaniso wekudya-mukicheni ine tafura hombe yekudyira padyo nekwagadzirwa chikafu. Chero mhando yekicheni yauinayo, dhizaini uye mashandiro ndizvo zviviri zvakakosha pazvinhu zvacho. Paunenge uchironga kana kugadzirisazve yako yekurota kicheni, iwe unoda kuita iyo hombe pfungwa. Kusarudzwa kwekombiki yekicheni nekudaro kwakakosha kwazvo. Kunyangwe mapombi ekicheni angave ari madiki, iwo ndiwo masisitimu echisikigo ekicheni chero ipi. Kuona kwevanhu kwakasikwa kunokwezva pombi yemukicheni. Naizvozvo iwe zvechokwadi uchaita fungidziro neWOWOW's yakakwira arc matte nhema kudhonza pasi kicheni pombi! Iyo WOWOW matte nhema inodhonza pasi mukomboni kombi inopa mhando yepamusoro kudhonza pasi pombi yekicheni ine dhizaini yakanaka pamutengo unodzikira wakaderera. Nekudaro iyi matte nhema inodhonza pasi pombi yekicheni inokupa iwe yakanakisa mutengo-kuita reshiyo iwe yaunowana mumusika.
Dhizaina dhiza dhizaini yekicheni mune matte dema
WOWOW yakakwira arc matte dema kudhira pasi kicheni faucet inoratidzwa neyemhando-yakafuridzirwa dhizaini iyo yakagadzirwazve neazvino maitiro echimiro. Neichi chikonzero, iyi kicheni faucet inowedzera kubata kwekunakisa kune chero kicheni. Zviripachena iwe uchafanirwa kusarudza yako kicheni faucet zvakanaka. Nenzira iyo ichaumba kubatana imwe yekubatana pamwe neayo ese ako kicheni dhizaini. Kubatsira kweiyi matte dema kudhira pasi kicheni faucet ndeyekuti iyo inogona kusangana pamwe neyakagadzirwa magadzirirwo, pamwe chete nemazuva ano kicheni magadzirirwo. Either way, WOWOW's matte dema kudhira pasi kicheni faucet icha kuvimbisa inoshamisa kupedzisa kubata kusvika kune chero kicheni. Kwete chete kuti ino gooseneck matte dema kicheni kicheni faucet inokupa iwe minimalistic dhizaini. Iyo yakapfava ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveiyi dhizaini yekicheni dhizaini. Zvisineyi, iyo inopa pamwe nekushamisa chirevo chekugadzira chine mavara ayo akasiyana uye akasiyana musanganiswa ezitaera. Kutaura chokwadi, kuWOWOW isu tinofunga iyi matte dema kudhira pasi kicheni faucet chidimbu cheudiki! Isu tine chokwadi chekuti kana mukashandisa iyi dhizaini yekubikira yekicheni mukicheni menyu, zvichaguma nezvishamiso zvakawanda zvevashanyi vako.
Mate dema dhonza pasi faucet nehupamhi kushanda mukicheni yako
Dhizaini ndeimwe, asi kuwedzera kukosha ndiko kushanda kwefekiti yekicheni. Paunenge uri mukicheni yako paDesign ndeimwe, asizvezve kukosha ndiko kushanda kwefekiti yekicheni. Paunenge uri mukicheni yako pane yemazuva ese, uchigadzirira zvinoshamisa zvisikwa zvecustomary, iwe unoda kuti ikutsigire iwe paunenge uchigadzira chikafu nekuchenesa mushure meizvozvo. Semhedzisiro, iwe unofanirwa kusarudza fenicha yekukicheni iyo inotsigira zvido zvako maererano nemarudzi ese emabasa ekicheni. WOWOW yakakwira arc matte dema kudhira pasi kicheni faucet yakagadzirirwa kukupa iwe wakanyanya kushanda. Kwete pasina chinhu, iyo matte dema kudhira pasi kicheni faucet inoonekwa seimwe yeanonyanya kushanda kudhira pasi kicheni faucets mumusika. Iyo yekudhonza-pasi chikamu cheiyi matte nhema yekicheni kiyi faucet inoshanda chaizvo. Kutanga pane zvese, iwe unogona nyore nyore kudhonza wega-inodzosera sprayer musoro kuitira kuchenesa zvikamu zvese zvekicheni yako kunyura. Mushure mekushandisa dhiraivha-musoro, ichaita zvinyoronyoro ichidzosera kwayo kwayakatanga kuita. Kunze kwekuti iwe unogona kunyatso shandura pakati peiyo nyoro uye yakaoma sipidhi maererano nebasa rako rekicheni. Iyo swivel adapta yematte yakasviba kudhonza pasi faucet yekupedzisira inozokupa iyo yekushanduka iyo iwe yaunoda.
Stainless simbi matte dema kudhira pasi kicheni faucet
WOWOW's matte dema kudhira pasi kicheni faucet inogadzirwa nesimbi isina chinhu uye zvimwe zvinhu zvemhando yepamusoro. Iyi yekudonsa pasi kicheni faucet haingori yekukanganisa chete asiwo ngura inodzivirira uye banga. Iyo WOWOW matte dema kudhira pasi kicheni faucet saka zviri nyore kuchenesa. Swipe iri nyore ichabvisa zvese zvasara zvicherwa uye choko chakavakirwa pamusoro weSilicone. Iyo yekupfekeka yekicheni pachayo iri nyore kuchenesa pamwe netaipi haingabatiri pairi. Kugara uchichenesa ako matte dema kicheni fenicha kunozivisa hupenyu hwakareba. Iyo yakakwira arc matte dema inodhonza pasi kicheni faucet yeWOWOW iri nyore kwazvo kuisa uye inouya nemirairo yakajeka yekuisa. Sezvo ichibata makumi mapfumbamwe emadhora pamberi kuputika, inokutendera iwe kuisa ino matte dema kicheni kiyi munzvimbo dzakasimba, pasina chero chinodikanwa counter clearance. Vagadziri veWOWOW saka vakafunga nezve zvinenge zvese zvekugadzira iyi matte nhema kudhonza pasi kicheni faucet. Naizvozvo WOWOW haatyi kukupa iwe-makore matatu warandi pane yayo yakasviba dhonza pasi kicheni faucet. Isu tine mamwe emhando dzezvigadzirwa zvedu uye tinovimbisa kuti yako ichava nekunyaradza kwakanyanya uye zvigadzirwa zvedu zvichaita pazvakaringana. Kana pane chero chikonzero ichi faucet yekicheni ingasaita sezvaunotarisira kubva kwatiri, isu tichadzosera chigadzirwa icho pasina muripo wakawedzerwa kwauri. Chekupedzisira, isu tinopa makumi mapfumbamwe-mazuva ekudzoka mahara musarudzo mune iyo matte dema yekicheni kiyi faucet inogona kunge isiri iwe yawaitarisira kubva mairi. Sezvauri kuona, isu tinovimba mune yedu newakuda kudhonza mukicheni faucet. Nekuda kweizvozvo isu tinogona kutarisira kuti uchave 90% kugutsikana!
Zvakanakira WOWOW yakakwira arc mate dema dhonza pasi kicheni faucet mune yakapfupi:
Inopa wow-factor kune chero kicheni
Yakasarudzika yakasarudzika yemhando yepamusoro uye yemazuva ano dhizaini
Inopa kushanda kwakanyanya kunoenderana nezvamunoda
Inosanganisa esthetics nekushanda kwakanyanya
Yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro
Chiri nyore kuchenesa uye chiri nyore kuchengetedza
3-gore waranti paiyi yakakwirira arc mate dema dhonza pasi khishi faucet
SKU: 2310700B Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Yakakwira Arc, Matte Black, Dhonzera pasi
Kompombi yekicheni / yekugezera pombi ine dhonza pasi sprayer
Imwe-Huri & 3 Makomba; Dheki-Gomo
Yakakwirira Arc / Gooseneck
1-Hole kana 3-Hole ine 8 inch Deck Plate Kufukidza
Maitiro matatu: Stream / Spray / Pause